Somalia:Warka TFG da -Deeqda Somaliland,Kulanka Baarlamaanka & Gud.Baarlamaanka oo la kulmi Doona Soomaalida Kunool Minneapolis | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Gar Gaar, Muqdisho, TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Warka TFG da -Deeqda Somaliland,Kulanka Baarlamaanka & Gud.Baarlamaanka oo la kulmi Doona Soomaalida Kunool Minneapolis
Wafdi Ka Socday Soomaaliland Oo Uu Ka Mid Ahaa Abwaan Hadraawi oo Muqdisho Lagu Soo Dhaweeyay
Wafdi ka socday maamul goboleedka Soomaali Land oo ka koobnaa ganacsato Odayaal iyo Abwaaniin ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Abaare 11 barqanima ee maanta ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cismaan “Aadan cadde” waxaa ka soo dagtay diyaarad sidday wafdi ka socda maamulka Soomaliland kaas oo ka koobnaa Lix xubnood oo isugu jirta ganacsato, odayaal dhaqameed iyo Abwaaniin uu ka dhex muuqday Maxamed Ibraahuim Warsame “Hadraawi” iyadoo xubnaha wafdiguna uu horkacayay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee maamulka Somaliland.
Wafdiga ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobalka Banaadir oo uu hogaaminayay guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. odayaal dhaqameeydyo, haween, barbaarta gaashaaman, fannaaniinta qaranka iyo ururada bulshada rayid ka ah.
Xubnahan ka socda maamulka Soomaliland ee deeqda u wada walaalahooda Soomaaliyeed ayaa markii ay ka soo dageen garoonka diyaaradaha waxay mid mid u gacan qaadeen dhamaan dadweynihi ku soo dhaweeyay garoonka, iyadoo fannaaniinta hobolada Waabarina ay halkaasi ku soo bandhigeen heeso ay ku soo dhaweeynayaan wafdiga ka socda maamulka Somaliland.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland ahna hoggaamiyaha wafdigan Xasan Axmed Cawad oo saxaafadda kula hadlay garoonka ayaa ka warbixiyay socdaalkan ay ku yimaadeen Magaalada Muqdisho waxa uuna sheegay in ay ka damqanayaan abaarta heyso walaalaha Soomaaliyeed ee ku sugan koofurta Soomaliya.
Sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobalka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ku soo dhaweeyay garoonka wafdiga ka socda Somaliland ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay gargaarkan ay keeneen walaalaha reer Somaliland.
Waa marki ugu horeysay oo wafdi ka socda maamulka Soomaaliland soo gaaran magaalada Muqdisho iyagoo socdaalkooda ku soo beegay gar gaar ay u wadaan dadka Soomaaliyeed ee ay saameyeen abaaraha ba’an ee ka taagan dalka iyagoo sidoo kalana qorsheynaya in gargaar kan la mid ah ay gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed ee u qaxay xeryaha qaxootiga ee dalalka Kenya iyo Ethiopia.
Kullan ay maanta ay ku yeesheen xarunta gollaha shacabka ee magaalada Muqdisho Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaaliya ayaa loo qaybiyay qoraallo ku saabsan sharciyada Maaliyadda ee ay Xukuumadda Soo gudbiysay Baarlamaanka iydoo dhicana kale guddoonka Baarlamaanka uu ka codsay Xukuumadda in ay ka war bixiso meellaha ay ku baxaan gargaar Soomaaliya la keeno.
Kullankii maanta oo uu shir guddoominayay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya mudane C/welli Ibraahim Siikh Muudeey waxaana soo xaadirtay 315 (saddex boqol shan iyo toban xildhibaan).
Marka uu furmay shirka ayaa waxaa mudanayaasha Baarlamaanka loo qaybiyay qoraallo ku saabsan shacriyada Maaliyadda ee ay xukuumadda FKMG ah ee Soomaaliya ay u soo gudbisay Baarlamaanka Soomaaliya iyadoo kullanka laga sheegay in dib la isugu soo laaban doono oo laga dooddi doono arrimahaasi.
Dhanka kale guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Cabadi Welli Ibraahim Shiikh Muudeey oo kullan ka shir guddoominayay ayaa Xukuumadda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka soo war bxiso meellaha ay ku baxaan gargaarka Soomaaliya la keenno si Baarlamaanka Soomaaliya uu u ogaado in si sharci ah ay ku baxeen iyo in kale.
Sidoo kale waxa uu ka codsay in ay Xukuumadda ka Jawaabto heshiisyadda ay la galay hay’addaha Ajaaninta ah ee dalka ku sugan.
Intaasi kaddibna waxaa la soo gabagabeeyay kullankii Baarlamanka ee maanta ka furmay xarunta gollaha Shacabka ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Minneapolis dalka Mareykanka ayaa maanta lagu wadaa in uu khudbad u jeediyo kummanaan dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool iyadoo dhinca kale uu kullan la yeeshay hay’addaha u dhaq dhaqaaqqa gargaarka.
Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya mudane Shariif Xasan Shiikh Aadan oo maalmahan socdaal shaqo ku marayay dalka Mareykaka oo shalay gaaray magaalada Minneapolis ee dalkaasi ayaa waxaa si weyn halkaasi ugu soo dhaweeysay Jaaliyadda Soomalaiyeed ee degan magaalada ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalka Mareykaka.
Wariyaha Radio Muqdisho ee dalka Mareykanka Liibaan Xuseen ayaa sheegay in guddoomiyaha Baarlamaanka uu xalay casho sharer la qaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis waxa uu sidoo kale sheegay in maata uu khubad u jeedin doono kummanaan Soomaali ah ee magaaladaasi ku nool.
Dhinaca kale guddoomiyaha Baarlamaan ayaa kullan la qaatay qaar ka mid ah hay’addaha gargaarka ee dalka Mareykanka kaasi oo ay uga wadda hadlen sidii ay u xoojin la haayen gurmadka Soomaaliya ka socda iyo in ay qayb weyn ka qaataan arrimahaasi.
Ugu danbeentii wariye Liibaan Xuseen ayaa sheegay in guddoomiyaha Baarlamaanka mudane Shariif Xasan Shiikh Aadan uu booqan doono jaamacad ku taalla magaalada Minneapolis taasi oo ay wax ka bartaan arday Soomaaliyaad iyadoo la filayo in guddoomiyuhu ii ardayda uga waramo xaaladda dalk uu marayo.
World Bank steps up famine aid Gaddafi –safe and sound: his daughter